Paleoclimatology: njirimara, ebumnuche na mkpa | Network Meteorology
Otu n'ime alaka geology bu paleoclimatology. Ọ bụ ihe gbasara ịmụ banyere njikota ụwa, ọdịdị ala, akwụkwọ ndekọ ala, nkesa nke isotopes dị iche iche n'oké osimiri na akụkụ ndị ọzọ nke anụ ahụ metụtara metụtara inwe ike ikpebi akụkọ ihe mere eme nke mgbanwe ihu igwe na mbara ala. Imirikiti ọmụmụ ihe ndị a gụnyere nyocha akụkọ ihe mere eme na ebumnuche nke inwe ike mụta mmetụta niile ọrụ mmadụ nwere na ihu igwe.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, ọrụ na mkpa paleoclimatology.
2 Ebumnuche nke paleoclimatology
3 Ntughari nke paleoclimatology
Mgbe anyị na-ekwu maka ịmụ banyere eriri ala ụwa, anyị na-ekwu maka mgbanwe na nhazi na nhazi ya. Eziokwu ahụ bụ na kọntinent na-agagharị kwa afọ na-eme ka ihu igwe nke mpaghara dị iche na nke abụọ. Imirikiti ọmụmụ ihe na paleoclimatology na-ezo aka ọnụnọ nke ụmụ mmadụ na ọrụ akụ na ụba na otu ha si emetụta ihu igwe ụwa. Ihe omumu nke omumu banyere ihe omumu nke paleoclimatology gbasara mgbanwe ihu igwe.
Dika anyi mara, enwere mgbanwe ngbanwe onodu ubochi nile site na mgbe e guzobere uwa rue taa. Mgbanwe ihu igwe ọ bụla kpatara mgbanwe dị iche iche na nhazi nke ikuku. Agbanyeghị, mgbanwe mgbanwe ihu igwe a niile mere na oke ikuku nke mere ka ụdị osisi na ahịhịa dị iche iche kesaa n'ụwa niile iji mepụta usoro mmegharị iji nwee ike ịlanarị n'agbanyeghị ọnọdụ ọhụụ. Mgbanwe ihu igwe dị ugbu a nke na-eme na narị afọ a na-eme na ọsọ ọsọ nke na-anaghị ekwe ka ndị dị ndụ gbanwee ya. Ọzọkwa, anyị ga-agbakwunye mmetụta gburugburu ebe obibi nke ọrụ mmadụ kpatara.
Mbibi nke usoro okike na ebe obibi nke ụdị dị iche iche bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa maka ikpochapụ ihe dị iche iche. Isi usoro na-akpata mgbanwe na ọdịiche dị na ihu igwe nwere ike ịbụ site na Mgbagharị kọntinent na usoro mgbanwe nke ụwa. Enwere ike ịsị na paleoclimatology na-amụ ihu igwe nke oge gara aga site na njirimara ihe ọmụmụ ala. Ozugbo inwetara data na ihu igwe nke oge gara aga, ị na-anwa ikpughe ka okpomoku si di na ihe ndị ọzọ gbanwere na mbara igwe gbalitegoro n’oge ụwa.
Ebumnuche nke paleoclimatology
Nchoputa nile nke emeputara na omumu banyere onodu ubochi gara aga, puru ikwusi na ihu igwe nke uwa a aghagh itisa. Ọ bụkwa na mgbe ọ bụla akpịrịkpa ọ nọ na-agbanwe agbanwe wee na-aga n’ihu taa na ọ ga-emekwa ya n’ọdịnihu. Ihu igwe na-agbanwe ọ bụghị naanị site na omume mmadụ kamakwa n'ụzọ nkịtị. Mgbanwe ndị a niile mere ka ọ dị mkpa ịmata mkpa ihe ụdị ebumpụta ụwa nke mgbanwe ihu igwe bụ. N'ụzọ dị otú a, ndị ọkà mmụta sayensị nwere ike iji ezi obi nyochaa mmetụta n'ezie omume ụmụ mmadụ na-enwe n'ọnọdụ gburugburu ebe obibi nke oge a.
N'ihi nyocha nke mmetụta nke gburugburu ebe obibi nke ọrụ mmadụ na ihu igwe, a pụrụ ịmepụta ụdị amụma dị iche iche maka ihu igwe nke ọdịnihu. N'ezie, iwu nke gunyere omume niile gbasara mgbanwe ihu igwe ugbu a abanyela na usoro sayensị sitere na nyocha nke ihu igwe na mgbanwe ya.
N’ime iri afọ gara aga, echiche dị iche iche apụtala nke na-anwa ịkọwa mmalite nke mgbanwe ihu igwe dị iche iche nke ụwa tara ahụhụ. Imirikiti mgbanwe ihu igwe ejiriwo nwayọ nwayọ, ebe ndị ọzọ mere na mberede. Ọ bụ echiche a mere ọtụtụ ndị sayensị ji ekwenye na ọ bụghị ọrụ mmadụ na-eme mgbanwe ihu igwe ugbu a. Nkwupụta sitere na ihe ọmụma banyere mbara igwe na-ejikọta mgbanwe na ihu igwe na ọdịiche dị na orbit nke ụwa.
E nwere echiche ndị ọzọ na -ejikọta mgbanwe ihu igwe na mgbanwe nke ọrụ anyanwụ. Enwekwara ụfọdụ ihe akaebe ndị na-adịbeghị anya na-ejikọ mmetụta meteorite, ọrụ mgbawa, na ọdịiche dị iche iche nke ikuku na mgbanwe ụwa n'oge gara aga.
Ntughari nke paleoclimatology
Iji nwee echiche zuru ụwa ọnụ banyere ihu igwe n'akụkọ ihe mere eme, achọrọ nwughari nke paleoclimate. Ntughari a na-eweta nsogbu ụfọdụ. Nke ahụ bụ ịsị, Enweghị ihe ndekọ ihu igwe dị adị karịa afọ 150 gara aga ebe ọ bụ na enweghị ngwaọrụ iji tụọ okpomọkụ na ihe ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe na mbara igwe. Nke a na - eme ka nrụpụta ọnụọgụ siri ike ịme. Ọtụtụ mgbe, a na-emehie ihe dị iche iche iji tụọ okpomọkụ gara aga. Maka nke a, ọ dị mkpa ịmara ọnọdụ gburugburu ebe obibi gara aga iji gosipụta ụdị usoro ziri ezi.
Ihe isi ike nke nwughari nke paleoclimatic bu na amaghi nke oma ihe onodu ubochi di na mmiri mmiri, oke osimiri, otu miri emi si di, oru nke algae, wdg. Otu n'ime ụzọ iji guzobe oke osimiri nke oge gara aga bụ site na ntinye UK/37. Nkọwa a nwere nyocha nke mmiri mmiri nke ụfọdụ ihe ndị na-emepụta ihe na-emepụta site na algae photosicnthetic unicellular. Algae a di na mpaghara uzo nke oke osimiri. Mpaghara a bụ ebe ìhè anyanwụ na-ada n'ụzọ ọ na - eme ka photosynthesis nwee maka algae. O siri ike iji index a eme ihe bụ na amachaghị etu mmiri siri baa n'oké osimiri n'oge ahụ, kedu oge n'afọ ọ ga-atụ, etu latitude dị iche iche, wdg.
Ọtụtụ mgbe enwere mgbanwe gburugburu ebe obibi nke na-ebute gburugburu ebe ndị na-adịghị ka ndị dị ugbu a. Mgbanwe ndị a niile amatala ekele maka ndekọ ala. Ojiji nke ụdị ndị a emeela ka paleoclimatology nwee nnukwu ọganihu na nghọta anyị banyere usoro ihu igwe ụwa. Obi abụọ adịghị ya na anyị mikpuru na mgbanwe ihu igwe ebe ọ bụ na ihe ndekọ nke oge gara aga na-egosi anyị na ma oke okpomọkụ nke oke osimiri na ahịhịa, ihe mejupụtara ikuku ma ọ bụ oke osimiri na-agbanwe oge ụfọdụ na usoro nke iri puku kwuru iri puku.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere paleoclimatology na mkpa ọ dị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Paleoclimatology
Oke Osimiri Okhotsk
Kedu ka ihu igwe dị